Rafitra fitehirizana haingana
Polycarbonate vita amin'ny endriny
Visera Blade azo esorina.
Laharana maodely Moutain bisikileta VM203
endri-javatra vavahady rivotra mahery, fampifanarahana loha loha, endrika tsy misy mombamomba azy
Raha vonona ny hanatsara ny lalao mitaingina dian-tongotra ianao dia natao ho anao ny bisikileta an-tendrombohitra. Ity fiarovan-doha any an-tendrombohitra rehetra ity dia manana kôkômbia sy fomba fampiasa sahaza azy, miaraka amin'ny vavahady fandefasana rivotra sy ny fandrakofana any aoriana, ity fiarovan-doha ity dia mitazona anao ho tony sy hatoky tena rehefa mitazona teerain-na sarotra, ary ny mpamono azy dia toa visor azo ovaina ary sppeedDial fit rafitra, ataovy safidy tsara ho an'ny traikefa an-dàlana eny ivelan'ny lalana. Tahaka ny bisikileta mandeha maivana sy lavitra kokoa ankehitriny izay afaka mandehandeha ny masony nefa koa miakatra-ity fiarovan-doha ity dia natao ho fialamboly an-tendrombohitra rehetra. Izy io dia manasongadina ny fandrakofana ambadika any aoriana izay mety tsara amin'ny mitaingina tontolo andro.
Ny famolavolana polycarbonate iray miaraka amina haingam-pandeha dia manome endrika tena mendrika ary ny rivotra miditra amin'ny rivotra dia mahatonga azy io milamina sy milamina ary ambany endrika amin'ny endrika lalana mandritra ny tontolo andro.
Ny hery mangatsiaka avy amin'ny lamba malaso mangatsiaka any an-toerana dia tsy ny fampiononana mety ihany fa ny hatsiaka ihany koa ary maina vetivety mandritra ny fandehanana. Miaraka amin'ny traikefa mihoatra ny 15 taona amin'ny fampandrosoana sy fanamboarana ny fiarovan-doha, dia nahomby tamina karazana lamba maro kokoa ho an'ny paompy, toa ny bakteria, volotsangana, TPU tsy misy fangarony, silipo ary fantsom-panafom-baravarankely PC / PP.
Ny tranokala manify miaraka amin'ny 0.7mm hitazomana ny fiarovan-doha maivana sy ny fitanana ny fikajiana ny fikajiana ary ny fitsapana mihodina amin'ny fenitra rehetra izay miantoka ny mitaingina saftey. Izahay koa dia manome endri-javatra fehy kokoa toy ny filan'ny mpanjifa miaraka amin'ny fitaovana refletive, maharitra, tenona vita amin'ny kofehy ary webbing tenona volamena.
Izahay dia nampita ny ITW buckle sy tri-hidy tamin'ny strap system mba hamehezana tsara kokoa ary hiasa mora foana amin'ny tanana iray izay mamela ny tanana iray hafa ho azo antoka mba hiantohana ny fiarovana ny mpampiasa. Ny Fidlock sy Osmar buckle dia misy amin'ny fanaingoana raha toa ka mila rafitra fandraketana mandroso kokoa ho an'ny vokatrao.
Ny rafitra fanitsiana haingana dia manome ny faran'izay ahazoana aina indrindra, ny famolavolana ny rivotra miaraka amin'ny géometry mandroso dia manatsotra ny mekanisma, ny rafitry ny fitambarana dia fehin-kibo, vatana, pinon ary fonosana misy fingotra, mahatonga azy io ho maivana kokoa sy azo atokisana ho an'ny saftey.
Teo aloha: Alim-by VC301
Manaraka: Helmetaly bisikileta an-tendrombohitra VM202
Helmet amin'ny bisikileta mahafinaritra
Helmets amin'ny bisikileta maloto